Ukuxhumana nomphakathi ... Bathi ngokoqobo yanqoba ukwazi. Futhi akusiwona nje ngabantu abasha. Thatha ngisho abazali zanamuhla kakade engaphezu kuka-40 ... Futhi ucabangani? Babonise "Ofunda nabo" nekhompyutha utawuba kuphela kubo. Futhi abantu abasha uthanda VC noma Facebook, futhi ngamunye banezizathu zabo. Kodwa ngokuvamile kwenzeka ukuthi emva sipho unomphela ukungena abanye hlobo luni lomphakathi noma ukudlala umdlalo, kukhona nesifiso esinamandla ukubhubhisa ikhasi lakho. Kulapha abadali inethiwekhi, ukuze singalahlekelwa "abalandeli" yabo, banikela yobumfihlo amasevisi. Kule ndaba, kukhona umbuzo: "Kungenzeka kanjani ukuthi ngibe ukufihla ikhasi lami," In Touch "? Phela, ungafuni umuntu "kwesokunxele" buka izindaba noma lutho okwamanje. Nakuba empeleni, okuyinto ke kudingeka ube umsebenzisi walesi sikhala?!
Kungani ukufihla ikhasi lakho?
Manje ngenkuthalo ekusakazeni ulwazi kwi-inthanethi - lokhu luyingozi kakhulu, kanye nezitatimende enjalo indiva futhi ukuxhumana nomphakathi, okuye abe litheku isizukulwane ethize yayisikhululeke kakhudlwana abasebasha yokuxhumana. Futhi abaningi bacabanga kanjani ukufihla ikhasi "contact" kuzo zonke. Othile ekuvimbeleni ngengozi engaba khona, umuntu nje ngizithola ukuba ilungu isikhala virtual, futhi umuntu nje efuna ivelele lapha ngakho lapha ngendlela ezingeyona inkimbinkimbi. Futhi, lokhu kuwubufakazi imibuzo siqu kakhulu futhi ugqozi yabo. Futhi uma unombuzo mayelana nendlela ukufihla ikhasi "contact", buvela eziningi omunye umbuzo mayelana nokuthi kungani ekuqaleni usethe ikhasi.
Izigaba Amakhasi ezifihliwe
Ngakho, uma ucabanga kanjani ukufihla ikhasi "contact", ngakho-ke kudingeka baqonde ukuthi kungani ufuna ukukwenza. Kodwa ngokwezinga elikhulu lokhu kusebenza wena uqobo, izifiso kanye izintandokazi zakho. Uma sikhuluma ohlangothini lwezobuchwepheshe, izinyathelo eziyisisekelo imi kanje:
Kunengqondo ukuthi ekuqaleni udinga ukuya ikhasi lakho ngokufaka igama lakho lomsebenzisi nephasiwedi.
Ekhoneni kwesokudla, lapho yonke imisebenzi kungenzeka bachazwa, ungakwazi ukuthola kalula "izilungiselelo zami".
Akunjalo kudala kulesi sigaba kwakukuningi amathebhu ezingakusiza wenze ngokunethezeka ukuphila kwakho endaweni ebonakalayo. Futhi kudingeka ithebhu "Ubumfihlo" wena.
Khona-ke ongayenza ngokuphelele konke, lokho inhliziyo yakho ufisa. Uma ufuna ukwazi ukuthi uzodlala kanjani ukufihla ikhasi "contact", bese kuba ngu-ukufunda lonke uhlu esibandakanya ubumfihlo.
Indlela yokusebenzisa izilungiselelo zobumfihlo "In Touch"?
Ngakho, uma ungene ngemvume ku-ithebhu "Ubumfihlo", unayo uhlu ukuthi iqala ukuvinjelwa ukumema e phi gwamanda futhi iphela ukuvinjelwa labo ungabona ikhasi lakho esikhaleni Inthanethi global. Ngakho-ke:
Funda uhlu oluphelele iziphakamiso.
Khetha zonke izigaba ukuthi udidekile.
Qaphela ukuthi le mikhawulo angasebenza bonke, abanye abantu on the abangane (futhi eceleni ku abangane abangane bakho ') nokunye. Ungenza etholakalayo zonke "ukuvinjelwa" bona kuphela.
Ukukhetha e "umusho" ngamunye esigabeni oyifunayo, buyekeza konke ngokucophelela futhi, ezansi uchofoze u- "Londoloza" inkinobho.
Ngemva kwalokho ubona umlayezo esishoyo ukuthi ushintshe okuthile futhi izilungiselelo zakho ukuthatha nomphumela.
Uma ukungabaza mayelana nendlela ukufihla ikhasi "contact" futhi zaphumela une ukukwenza - ungacela umngani wakho (okuyiwona futhi uvale ukufinyelela ikhasi yakhe), futhi uzoqiniseka ukuthi bathi wabona, futhi yini - akukho. Futhi, kuye ngokuthi inhloso kanye isizathu lapho kwavela njengoba nesifiso esinamandla ukufihla konke, kufanele sinake ukutholakala imisebenzi "uhlu black" - lena isici esithakazelisayo kakhulu elikuvumela ukuba balahle labo ecasulayo ngokungagwegwesi.
Ayn Rand kanye incwadi yakhe, "I Ubuhle of Ubugovu"
Uyithola kanjani i-AIDS